အသားနှင့်ငါးကို ဘာကြောင့် ဈေးကနေ မနက်စောစောဝယ်သင့်သလဲ – Shwehealth.com
အသားနှင့်ငါးကို ဘာကြောင့် ဈေးကနေ မနက်စောစောဝယ်သင့်သလဲ
3. မတျ 2016 13. ဧပွီ 2016
လတ်ဆတ်သော ဟင်းလျာများ ချက်ပြုတ်ရန်အတွက် လတ်ဆတ်သော အစားအစာများ လို အပ်သည်။ လတ်ဆတ်သော အစားအစာများရရှိနိုင်ရန် အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဈေးကို စောစောသွားရန် လိုအပ်လှသည်။ အဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သနည်းဆိုသည်ကို အောက်တွက် ခေါင်း စဉ်များခွဲ၍ ရှင်းပြမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဈေးအများစုတွင် ရေချိုငါးအချို့ဖြစ်သည့် ငါးကြင်း၊ ငါးတန်၊ ငါးပတ်၊ ငါးမြင်း၊ ငါး သလောက် စသည်တို့ကို ရေခဲရိုက်ငါးအဖြစ် ရောင်းချကြသည်။ အဆိုပါငါးများကို ဖြန့်ချိသည့်နေရာ မှ ရေခဲပုံးများဖြင့် ထည့်သွင်း၍ ပို့ဆောင်လေ့ရှိသည်။ ဈေးဖွင့်ချိန်တွင် အဆိုပါ သေတ္တာပုံးများကို ဖွင့်လှစ်ရောင်းချလေ့ရှိပြီး မနက်စောစောအချိန်သည် အဆိုပါငါးများကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ရနိုင် ရန်အတွက် အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
ပင်လယ်ငါးများဖြစ်သည့် ငါးမုတ်၊ ငါးပုတ်သင်၊ ငါးပါးနီ၊ တီလားပီယား၊ ရေဘ၀ဲနှင့် ကင်းမွန် စသည့်ငါးများကိုလည်း ရေခဲရိုက်အဖြစ်သာ ရောင်းချကြသည်။ ထို့ကြောင့် မနက်စောစော ဈေးသွား ခြင်းဖြင့် အဆိုပါ ငါးများကို အလတ်ဆတ်ဆုံးရရှိနိုင်မည့်အပြင် ကောင်းစွာရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မည် လည်းဖြစ်သည်။ လတ်ဆတ်မှုကို အလွယ်တကူစစ်ဆေးရန်အတွက် ပါးဟက်များနီနေခြင်းရှိ မရှိကို ကြည့်၍လည်း သိနိုင်သေးသည်။
သို့သော် ရေချိုငါးအချို့ဖြစ်သည့် ရေချိုငါးခူ၊ ငါးကျည်း၊ ငါးစင်ရိုင်း၊ ငါးနုသန်း၊ ငါးပြေမ၊ ငါးရံ့၊ ငါးသလဲထိုး စသည့်တို့ကို ၀ယ်ယူမည်ဆိုလျှင်တော့ မနက်စောစောဈေးသွားရန်မလိုအပ်ပေ။ အကြောင်းမှာ ရောင်းသူများသည် အဆိုပါငါးများကို မရောင်းမီအထိ အရှင်သိုလှောင်ထားလေ့ရှိသော ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ၀ယ်သူလာမှသာ ချက်ပြုတ်ရန်အသင့်ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးကြသည်။ ထို့ ကြောင့် အဆိုပါငါးများကိုမူ ဒေသခံဈေးများတွင် အချိန်မရွေး လတ်ဆတ်စွာ ရရှိနိုင်ပေသည်။
၀က်သား၊ အမဲသား၊ ကြက်သား၊ ဘဲသား၊ ဆိတ်သား စသည့်အသားများမှာ ယေဘူယျအား ဖြင့် လတ်ဆတ်နေလေ့ရှိသည်။ အကြောင်းမှာ ယင်းအသားများကို သားသတ်ရုံမှ နေ့စဉ်လတ်လတ် ဆတ်ဆတ်ပို့ဆောင်ခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ ယင်းသားသတ်ရုံများသည် မနက်စောစော (၃ နာရီ ခန့်တွင်) အလုပ်စတင်လေ့ရှိကြပြီး အသားများကို ဒေသခံဈေးရောင်းသူများထံ ပို့ဆောင်ပေးကြ သည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းအသားတို့မှာ လတ်ဆတ်လေ့ရှိသည်။ သို့သော် ဈေးသို့စောစောသွားခြင်း ဖြင့် သင့်အတွက် ရွေးချယ်ဝယ်ယူစရာ အများအပြားတွေ့ရနိုင်သည်။ ထို့အပြင် မြို့ငယ်များတွင် သင့်အနေဖြင့် ၀က်နံရိုး၊ ကလီစာ၊ ဦးနှောက်၊ ၀က်လက်စသည့် အနည်းငယ်သာရနိုင်သော အသား များကို ၀ယ်ယူလိုပါက မနက်စောစော သွားရန် မဖြစ်မနေလိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။
ကြက်သားဝယ်ရန်အတွက်မူ စောစောစီးစီးသွားရန် မလိုသော်လည်း သေချာစိစစ်ဝယ်ယူရန် လိုအပ်သည်။ ကြက်သားသည်လည်း ရောင်းသူများမှ မနက်စောစောအချိန်တွင် သတ်ပြီး ဈေးသို့ တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင် ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။ ရောင်းချသူများမှ တစ်နေ့စာရောင်းချရန်အရေအတွက် ကို ခန့်မှန်း၍ သတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ စိစစ်ရသည့်အကြောင်းမှာ တစ်နေ့စာရောင်းမကုန်သည့် ကြက် သားများကို ရေခဲရိုက်ထားပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် ပြန်လည်ရောင်းချသည်ဖြစ်ရာ လတ်လတ်ဆတ် ဆတ်အလိုရှိပါက သေချာစွာ စိစစ်ဝယ်ယူရန် လိုအပ်လေသည်။
အထက်ပါအခြေအနေများသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒေသခံဈေးများ၏ လက်ရှိအခြေအနေပင် ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဆိုရလျှင် ဈေးသို့စောစောသွားရခြင်းကို သဘောကျသည်။ စောစောသွား ခြင်းဖြင့် အသားငါးများသာမက ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ကောင်းစွာ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အချို့သော ငါးများမှာ ဈေးထဲတွင် အရှင်ရောင်းချသော်လည်း ငါးကြီးများနှင့်အသားများအတွက်မူ စောစောသွား ခြင်းက ပို၍လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ရစေသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အသားငါးတို့၏ လတ် ဆတ်မှုလျော့ကျသွားသည့်အပြင် အရသာကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေဖြင့် အစားကောင်းကြိုက်သူဟုတ်သည်ဖြစ်စေ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဈေးသွားမယ်ဆိုရင် တော့ စောစောသွားသည်က ပို၍ကောင်းလေသည်။